Ndithande Jumbo ilungu uya kuxhasa iRiooooo kwaye ujonge izi nzuzo ezilandelayo
isantya nokukopisha ubuninzi ukuya 4000 KB / s = 4 imizuzu GB nganye!
Ukufikelela kwi-12 ngokulandelelana / ngokulandelelana ngokufana okanye i-12 idilesi kwidilesi ye-IP = (4000 KB / sx 12)
Akukho ntengiso nakweyiphi indawo kwisayithi, ukuhlambulula nokuhamba ngokukhululekile
Ukufikelela kwezinye Izongezelelo kunye ebhasini wadalwa Rikoooo
Ukukhuphela ngqo ukusuka eluhlaza 'Layishela ezantsi' iqhosha
Kutheni kukho ukunikezwa kweJumbo? Ukuthumela ukulayishwa kumawaka angaphezu kwewaka lama-abasebenzisi kubandakanya iindleko ezibalulekileyo. Ezi zindleko azikwazi ukufakwa kuphela ngeentengiso. Nangona kunjalo, ngesicwangciso seJumbo unokunceda ngokukodwa ukugcina iRiooooo.com kwi-intanethi. Ubulungu bungenokuzikhethela ngokwenene, unako ukukhuphela ngokukhululekileyo zonke iifayile kwixesha elifutshane.
* Ukukhuphela umlinganiselo kuyahluka ngokuxhomekeka kwintanethi yakho kunye nexesha
Ayikwazi ukulayisha umxholo weetayitip.